अमेरिकी भाइरल रोग विशेषज्ञ डा. फाउची भन्छन् – कोरोना रोक्न यी ५ कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक::अर्थपूर्ण : अर्थ र सम्पूर्ण समाचार
काठमाडौँ । अमेरिकी भाइरल रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले विश्वबाटै कोरोनाबाट रोक्न ५ वटा महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार एमएसएनबिसीसँग कुरा गर्दै डा। फाउचीले विश्व यी ५ सिद्धान्तलाई मानेर अगाडी बढेमा मात्र कोरोना रोक्न सकिने बताएका छन् ।
समयमा उपचार नपाउदा वृद्धाको मृत्यु